Qaban qaabada soo dhoweynta madaxweynaha Soomaaliya oo laga dareemayo Garoowe - calanka.com
Qaban qaabada soo dhoweynta madaxweynaha Soomaaliya oo laga dareemayo Garoowe (Calanka.com) - Posted at 28/04/2013 By Bashka
Waxaa magaalada Garoowe ee xarunta Maamul Goboleedka Puntland laga dareemayaa soo dhoweynta wafdiga Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo beri subaxdii la filayo inuu booqdo.
Booqashada Madaxweyne Xasan Sheekh uu ku tegayo magaalada Garoowe ayaa noqoneysa tii ugu horeysay ee maamulka Puntland oo booqdo tan iyo markii uu xilka qabtay, wuxuuna magaalada Garoowe uu kula kulmi doonaa Madaxweynaha Maamulka Puntland C/raxmaan Faroole iyo xukuumaddiisa.
Wararka ayaa sheegaya in Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Faroole in ay ka wada hadli doonaan arrimo badan oo dhinaca Federaalisimka, arrimaha jubooyinka oo maamulka Puntland iyo Dowladda Dhexe ay ku kala aragti duwan yihiin iyo qodobo kale.
Maamulka Puntland ayaa saluugsan siyaasadda dowladda Federaalka ee ku aadan dhismaha maamul u sameynta gobolada Jubbooyinka, waxayna Puntland ay dhowr jeer ku eedeysay Dowladda Federaalka iney faragelin ku hayso dhismaha maamulka Jubaland.
Warku wuxuu intaa ku darayaa in wafdiga Madaxweynaha ay magaalada Garoowe ku sugnaan doonaan ilaa maalinta Isniinta kadibna dib ugu laaban doonaan Muqdisho.
Bishii Maarso ayaa waxaa magaalada Garoowe booqday Ra'iisul Wasaare Cabdi Faarax Shirdoon iyo xubno golaha wasiirada ka tirsan.
C/raxmaan Faroole oo mudo Afar sano ah ka talinayay maamulka Puntland weli ma booqan magaalada Muqdisho, waxayna dad badan isweydiinayaan sababta Madaxda Dowladda Federaalka ay ku booqdaan Garoowe Faroole oo tan iyo markii uu xilka madaxtinimada Puntland qabtay uu ka gaabsanayo inuu soo booqdo xaruntii dalka